Fraịde, Septemba 10, 2010 Thursday, June 18, 2015 Nick carter
A izu ole na ole azá '',, M gwa 1 nke usoro ntapu ahịa usoro: Onye chọrọ ịma? Kedu nke, n’ezie, mechara bụrụ edemede n’etu esi ebute ndu. Akwụkwọ akụkọ, nri? Tupu ị gawa, ị ga-enwe ndị na-ege gị ntị nke ga na-atanye na mmiri. Ọ dị mma, ọ bụrụ na echiche ahụ siri ike karịa gị, mgbe ahụ ị kwesịrị ị ga-akwụsị ịgụ ugbu a. Ndụmọdụ m n'izu a bụ ihe kachasị mkpa: afụla ara.
Edere m akwụkwọ mgbasa ozi mbụ m banyere 13 nkeji mgbe m tọhapụrụ atụmatụ ahịa nsị na AddressTwo. Mba n'ezie, emere m. M dere a mmemme, mgbe ahụ, chere, "ah, ihe heck, m chere na m ga-mma iji ya." Ejiri m ihe dị ka nkeji 30 ọzọ na-ede ọtụtụ ozi ịntanetị ogologo oge maka nyocha ọ bụla na-akwụghị ụgwọ. Maa amụma. Ha muru.
Kemgbe ahụ, amụtara m ihe niile m maara taa gbasara ahịa nta mmiri Bọọlụ Lorraine. Gịnị ka m mụtara? Ọdịnaya ya agbaghị. Ọ dị mma. Ezigbo mma. Ọ dị ezigbo mma, n'eziokwu, na ọ bụrụ na ị debanye aha ya na otu esi ede atụmatụ azụmahịa, nsonaazụ ya dị ịrịba ama: ị mụtara n'ezie esi dee atụmatụ azụmahịa. Gaghị enweta teasers kwa izu banyere otu ị ga-esi mụta ide atụmatụ azụmahịa. A naghị ebupute gị otu oke banyere otu ị si dị mma, ị ma ihe, ị na-echekwa ya-ọ bụ ndị dị ka gị. Findchọpụtaghị na gị onwe gị kwa nwere ike ịmụta ide atụmatụ azụmahịa maka naanị ịkwụ ụgwọ 4 dị mfe nke $ 19.95 / mo. Mba, ọdịnaya ya anaghị ara ara.
Ọ bụrụ na ị na-ede ahịa azụmaahịa, egbula mmiri. Nye ọdịnaya gị kachasị mma. Ikwesiri ikweta na ndi mmadu debanyere aha gi iji nweta uru, ma oburu na ha anataghi ya, ha gha wepu aha. Yabụ, ka ị na-ede ọdịnaya gị, tinye ndị isi a n'uche:
Gịnị mere onye nnata ji kweta ịnata ọdịnaya a? Kedu ihe ha na-atụ anya ịnata n'ọnọdụ ego (ee, ụgwọ) ị nweta email gị na igbe mbata ha? Mgbe ahụ ... you na-ezute na atụmanya ahụ?
Olee uru onye nnata ga-erite site n’inweta ozi a? Ọ bụghị otu ị ga - esi rite uru na ha ịnata ya, anyị ga - enweta nke ahụ ma emechaa. Nke mbụ, zaa otú ha si erite uru. Ọ bụrụ na ọdịghị ihe dị na ya maka ha, ha ga-akwụsị ịnara ya.
Kedụ ka ị ga-esi rite uru na nnata enweta ozi a? Ee, anyị nwere ike ịjụ ajụjụ a, mana rịba ama usoro a tụlere ya. Ihe ị na-achọ ebe a bụ ọdịnaya ị nwere ike ịkụziri ma ọ bụ kesaa na onye nnata na (1) na-erite uru ha (2) n'otu oge na-erite uru site na ha ịmara ya. N'adịghị ka ndị ọkachamara na-azụ ọzụzụ, ịkụziri onye zụrụ ahịa anaghị enyefe n'efu ozi. Onye zụrụ akwụkwọ nwere ike ịbụ atụmanya / ndị ahịa ka mma. Kedu ihe ị chọrọ ka atụmanya niile mara tupu gị na ha emekọrịta ihe?
Ọ bụrụ na ị inu ara (ya bụ, kekọrịta naanị eriri na-enweghị ihere-ọdịnaya na nkwado) ị nwere ike ịnweta nsonaazụ dị mma: ahịa. Ọ bụrụ na ị inughị, agbanyeghị, ị ga-enweta ahịa. Ee e, n'ezie, ị ga-eme ya. Enwere ike ịme ya, mekwara ya nke ọma. Nnukwu ahịa. Obi ụtọ ahịa. Na otu ihe: ọzọ ndị debanyere aha. Ndị mmadụ na-eziga ọdịnaya dị mma, ọ bụghị ezigbo ad. Suo na ị ka nwere ike ire. A suụla, ị ga-erekwa ugboro ugboro. I kpebiri.
Tags: ọdịnaya emailahịa mkpọpu ahịaỌdịnaya Emailbọl lorraineokirikiri
Sep 10, 2010 na 6:36 PM
Ọ dị mma ịmara, anaghị m inu ara… Nnukwu, Ana m agbaso usoro Seth Godin. nye ya, ma ọ bụrụ na ọdịnaya dị mma, ndị mmadụ ka ga-akwụ ụgwọ maka ya.
Edepụtara m akwụkwọ ọdịyo niile nke ebo niile, n'efu, mana m zụtara otu. ahụrụ m ndị ahịa m ga-emekwa!